कहिल्यै नसकिने शेरबहादुर-रामचन्द्र झगडा, सार्वजनिक कार्यक्रममै भनाभन – Krazy NepaL
April 10, 2021 497
यसअघि सभामा नै पौडेल र देउवाबीच सामान्य भनाभन भएको थियो । त्यसमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवालाई साथ दिएको कार्यक्रममा सहभागी एक कर्मचारीले बताए । निधिले सभापति देउवाकै शैलीमा नयाँ सरकार गठनका लागि संसद्मा संख्या पुग्नुपरेन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ । स्रोत : News24nepal.tv
Prevअरुको दु:ख देख्न नसक्ने खालका हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, लुकाउने गर्दछन् आफ्नो बेथा !
Nextशरीरका यी अङ्ग दुख्नुको हुन्छन् पाँच अपत्यारिला कारण जान्नुहोस् के हुन् त ती